Saraakiil Al-shabaab ka tirsan oo lagu qabtay duuleedka magaalada Kismaayo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Saraakiil Al-shabaab ka tirsan oo lagu qabtay duuleedka magaalada Kismaayo
Wararka naga soo gaaraya gobolka J/hoose ayaa sheegaya in ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM oo howlgalo ka sameeyay duuleedka magaalada Kismaayo ay gacanta kusoo dhigeen saddex sarkaal oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Xarakada Al-shabaab.
Ciidankaasi oo saxaafadda usoo bandhigay saddexdaasi sarkaal oo ay howlgalada ku qabteen ayaa sida la sheegay mid ka mid ah dhalasho ahaan kasoo jeedo dalka Itoobiya, waxaana uu Al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada miinooyinka ah ee dhulka lagu aaso.
Sarkaalkaasi Itoobiyaanka ah ayaa magaciisa lagu sheegay C/rashiid Mowliid Mubaarak, wuxuuna kasoo jeedaa qabiilka Waleyta ee dalka Itoobiya, waxayna ciidanka Jubbaland sheegeen inay weli baaritaano ku haayaan sarkaalkaasi, islamarkaana ay haatan su’aalo weydiinayaan.
Ilaa iyo haatan ma jirto warar madax-banaan oo xaqiijinaya in sarkaalkaasi la qabtay uu dhalasho ahaan kasoo jeedo dalka Itoobiya iyo inuu ninkaasi ka tirsanaa Xarakada Al-shabaab, mana jiraan hadal kasoo baxay saraakiisha Al-shabaab oo ay arrinkaasi kaga hadlayaan.
Si kastaba ha ahaatee, ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM ayaa mudooyinkii ugu dambeysay deegaanada gobolada Jubbooyinka ka bilaabay howlgalo ka dhan ah Xarakada Al-shabaab, waxaana uu howlgalkaan qeyb ka yahay howlagalada Al-shabaab looga saarayo deegaanadaas.